လမ်းဆုံ .....: http://myanmar.yoolk.com/
မြန်မာပြည်အတွင်းမှာရှိတဲ့ လိပ်စာတွေ . ဖုန်းနံပတ်တွေကို ရှာဖွေပေးနိုင်တဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုပါပဲ
ကုမ္ပဏီတွေ . သင်တန်းကျောင်းတွေ . စားသောက်ဆိုင်တွေ . ဟိုတယ်တွေ .. စသည် စသည်ဖြင့်
အဆင်ပြေသလို သုံးကြည့်ပေါ့နော် ..
Posted by Kaung Khant at 5.3.10